Dalxiis Wershada - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
carruurta dharka dabbaasha
haweenka dharka dabbaasha
hal gabal dabaasha
Yoga xirtay set
Ku saabsan warshaddeenna ganacsiga wadaagga ah
Warshadeena iskaashatada ah ee ku takhasustay soo saarista dharka dabbaasha iyo dharka isboortiga, kuwaas oo si wanaagsan u xakameyn kara qiimeynta wax soo saarka, xakameynaya tayada badeecada illaa heerka ugu weyn, isla markaana dardargelinaysa jawaabta suuqa. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira in ka badan 2300 shaqaale warshadaha, iyo aagagga aqoon isweydaarsiga in kabadan 4000 mitir oo laba jibaaran.
Bilowgii aasaasida shirkadda, waxay dhalisay koox maareyn farsamo oo tayo sare leh, karti u leh nidaam adeeg wax soo saar oo dhameystiran, waxayna si weyn ugu maalgashaday soo bandhigidda khadadka waxsoosaarka sare, mashiinnada goynta tooska ah, mashiinnada fidinta iyo aaladaha kale ee hoggaaminta. Maalmahan, mashiinno dharka tolida kala duwan iyo qalabka daabacaadda sublimation-ka ayaa si fudud loo heli karaa. Waxaa jira 6 xarumo gole caadi ah, 36 afar irbad ah iyo lix mashiinno khaas ah, wax soo saar bille ah oo ka badan 200,000 gogo '.
Warshaddeenu waxay leedahay in kabadan 180 farsamoyaqaanno, iyo QC khibrad leh oo khibrad leh oo mas'uul ka ah kormeerka waqtiga wax soo saarka dhexe iyo ka hor inta aan la soo dejin, hubi in la ilaaliyo tayada sare ee macaamiisha.
Si aan u taageerno amarro yar yar oo ka yimid Amazon ama ganacsatada kale ee yaryar, waxaan diyaarinay saami ku filan oo ah ku dhawaad ​​naqshad kasta oo bakhaar ah oo la keeni karo maalmo gudahood, waxaan si diiran kuugu soo dhoweynaynaa inaad booqato shirkaddeena si ay ugala hadasho ganacsiga kale haddii ay suurtagal tahay.
Cinwaanka: Qolka 905, Dhismaha Rongtaian, No.139 Jinhuai Street, Quanzhou, Fujian, China